KITRA AMBOARAN’I MADAGASIKARA : Nanoratra anarana voalohany ny Fosa Junior
Niondrika tamin’ny isa 1 sy 2 ny ekipa miaramila Cosfa avy ao aminy ligin’Analamanga rehefa norangotin’ny Fosa avy aty Boeny tao an-jaridainany. 30 novembre 2017
28 minitra tamin’ny fizaram-potoana voalohany no nahazo korinera ny Cosfa avy teny amin’ny ilany an-kavanana, ka nodomin’i Nono tamin’ny lohany, avy eo nipaka tampoka teo amin’ny tratran’i Théodin vodilaharan’i Fosa ny baolina ka nivadika ho isa tombony ho an’ny mpifanandrina taminy, izany hoe bcc na « ballon contre son camps ». Io rahateo no isa nisarahan’ny roa tonta tamin’ny fialan-tsasatra. Nivoaka avy tao an-davaka avy eo ny Fosa ka nahazo coup-francs teo amin’ny 25 metatra miala ny tsato-by ny ekipan-dramiaramila, izay nisantaran’i Santatra ny baolina voalohany tamin’ny minitra faha 73.
Marihina fa mpilalao vao nampidirin’ingahy Bob sy Menahely mpanazatra ny Fosa tamin’io fizaràm-potoana faharoa io ny tovolahy dia izao nandoaka ny haraton’ny Cosfa izao. Fa tsy namelan’ity kintan’ny kitra eto Boeny ity fa tonga dia norangotiny tamin’ny minitra faha-82 ny miaramila, izay nanampian’i Jean Yves indray ny baolina faharoa ho an’ny Fosa ka nitarika io, fahazoana ny amboaran’i Madagasikara io ny alahady teo. Tao an-jaridainan’nyCosfa avy ao amin’ny ligin’Analamanga mihitsy no noporofoin’ny Fosa fa tsy kisendrasendra ny nahavitan’izy ireo dingana maro nivoahana tamin’ity fifaninanana ity, rehefa nandeha ila ihany satria efa raraka tamin’ny fiadiana ny tompon-dakan’i Madagasikara ny Fosa. Dia nahay niarina haingana ka tonga nibata indray ny amboara izy ireo ny alahady 26 novambra teo tao Mahamasina. Ho an’ny ekipan’ny miaramila kosa dia tsy nahazona ny fanambiny raha saika hamerina indray ny lazan’ity ekipa ity rehefa tsy hita intsony hatramin’ny taona 1992 nahazoan’izy ireo farany io anaram-boninahitra io.
Fa mbola ny ekipa avy aty amin’ny faritr’i Boeny hatrany no nisalotra imbetsaka io amboaran’i Madagasikara io hatramin’ny taona 1974 nanombohan’ny fifaninanana, tamin’ny alalan’ny ekipan’ny Fortior club de la cote Ouest, izay efa nahazo izany indimy be izao, raha ny ekipan’Atanikatsaka dia ny Ajesaia avy any Analamanga no nahazo izany inefatra nifanesy. Ho an’ny Fosa junior kosa dia hotsenaina makotroka ireto andrarezin’i Mahajanga ireto amin’ny alarobia 29 novambra izao eny Amparihimahitsy Rn 4.
Ireto farany moa no hisolotena ny Malagasy amin’ny lalao Afrikanina eo amin’ny ekipa tompon’ny amboara amin’io taona ho avy io, izay ialohavan’ny “super coupe” atao eto Mahajanga ny lalao mandroso ny 10 desambra ho avy izao, hifanandrinan’ny avy amin’ny Cnaps sports avy any amin’ny ligin’Itasy, izay tompon-dakan’i Madagasikara tamin’ity taona ity koa. Ho hita eo izany ny tena mahery, fa efa hanomboka amin’ity herinandro ity ihany ny fampivondronan’i Bob ilay Hollandais, tompon’ity Fosa ity, Baggio, sy ireo namany hafa ho voaantso amin’io fiadiana ny super coupe io.
Marihina fa i Bob mpanazatra ny Fosa ny Boeny no mpanazatra mendrika indrindra notoloran’ny Telma ny loka niaraka tamin’ity ekipa notantaniny ity. Izahay eto amin’Ino vaovao faritra Mahajanga koa dia mirary soa ho an’ny Fosa amin’ireo lalao Afrikanina izay tsy maintsy mbola hatrehany amin’io taona ho avy io.
Takian’ ny vahoakan’ ny faritra iva andeha hisotro ronono Ravalo HETSIKA TETSY AMPEFILOHA (199) 12 décembre 2018 Matotra sy nirindra ny fandaharan-dRajoelina, lainga sy hevi-dravina no nasetrin-dRavalomanana ADY HEVITRA HO ENY IAVOLOHA (177) 10 décembre 2018 Vehivavy iray maty notapahin-doha, tsy hita popoka ny vadiny SAMBAVA (177) 11 décembre 2018 “Tahaka ny fandroahana mpiasa an-trano ny fanalana mpiasam-panjakana” RAVALOMANANA TEO AMIN’NY FITONDRANA (151) 13 décembre 2018 Tsy misy resaka politika ny fisamborana an’i Haja TONIA MPAMPANOA LALANA (144) 9 décembre 2018 Efa ho 580 Miliara fmg ny hetra tsy voaloan’ny orinasa Tiko FITONDRANA JADON-DRAVALOMANANA (111) 10 décembre 2018